8 Xilliga Thrones wuxuu leeyahay isbedel weyn oo aad illowday - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo »Xilliga Ciyaarta Thrones '8 Waxay Soo Bandhigi Doontaa Isbedel Muhiim Ah Ah Inaad Muujin Kartid - BGR
Xilligii ugu dambeeyay Game of Thrones waxaa la abuuray habeenkii Axadda, isagoo qoraya rikoodh cusub oo dhagaystayaal ah oo taxanahan ah. Dhacdadii ugu horreysay waxay ahayd iftiin ficil, laakiin aad ugu culus wadahadalka kuwaas oo soo bandhigay isdhexgalo badan oo muuqaal ah oo aan u dhimaneyno si aan u aragno, oo ay ka mid yihiin muujin muhiim ah oo ka mid ah midkood.
HBO, si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqatay inay xiiseyneyso in ay dhex maraan daqiiqadahaan isla markaana u dhaqaajiso sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah ee cutubka soo socda, taas oo nagu soo dejin doonta ujeedka ugu dambeeya taxanaha. Laakiin waxaa jiray waxyaabo kale oo ka mid ah dhacdooyinka ugu horreeya ee ay sameeyeen si kala duwan, marka loo eego dhammaan xilliyada kale, oo laga yaabo inaad seegto - guuldarooyinka ugu waaweyn ee dhacdooyinka ugu horreeya ee xiga 8 Raac halka hoose, sidaas darteed hubso in aad daawato Winterfell ka hor intaadan hore u socon
Waxaa jira laba nooc oo wax lagu duubo: kuwa daawanaya dhibco furan oo muujinaya muujinta ay jecel yihiin iyo kuwa iyaga iska indhatiray. Ciyaarta Taageerayaasha Thrones Si kastaba ha ahaatee, waa in la ogaadaa arrintan, si kastaba ha ahaatee, sida taxanaha furan ee xaalad kasta waa mid gaar ah, waxay soo bandhigaysaa meelaha dhacdooyinka dhacdooyinka noo horseedi doono.
Wixii 8 xilli, filimayaasha iyo shirkadda ka dambaysa isbeddelka furan ee hadda furan ayaa sameeyay dhowr isbeddel oo ku yimid isbeddelkan, isbeddelka aanad isla markiiba aqoonsan doonin haddii lagaa jarayo. Halkan waxaa ah:
Farshaxanku wuxuu la mid yahay wixii aan ka barannay inaan ka filanno Game of Thrones laakiin sababtoo ah inta badan jilayaasha waxaa hadda loo qaybiyaa laba goobood oo muhiim ah - Winterfell iyo King's Landing - soo noqoshada waxaa lagu helaa lakab qoto dheer oo cusub. Marka ugu horeysa, waxaan ku aragnaa gudaha gudaha qalcado, oo ay ku jiraan qolka King's Landing's Throne Room iyo Stark's Winterfell Crypt.
Kooxda Elastic, oo ka dambeysa muuqaalka furaha xisaab furan, ayaa la abuuray. sanadihii la soo dhaafay, laakiin kaliya dhowr sano ka hor in Game of Thrones soo bandhigay David Benioff iyo DB
"Waxay yiraahdeen," Aynu taxadarno, "ayuu yiri Kirk Shintani. laga bilaabo Elastik ilaa BuzzFeed "Waxyaabaha aad rabto inaad sameyso, waxaynu sameynaa. Anaga, toddoba sano oo fikrado ah ayaa bilaabay inay guga. "
"Miyaadan helin aragti caalami ah. Waxaad helaysaa aragti gaaban oo gaar ah oo ku saabsan waxa socda, "ayuu sharaxay, isagoo sharraxaya taxanaha cusub.
"Waxaan dooneynay inaan sahaminno fikradda ah inay jiraan waxyaabo badan oo ka hooseeya xilliyadii hore, iyo in ay jirto gudaha iyo qoto dheer marka la eego qoryaha dhulka hoostiisa ah ee aan horay uga tagnay," ayuu yidhi Agaasimaha Farshaxanka Angus Wall.
Isbedel weyn oo kale oo ay taageerayaashu u arki doonaan isla markiiba waa horudhaca ciidamada undead. iyada oo la isticmaalayo fayofarka guddiga oo ka soo baxa caddaan si qurux badan. Marka ugu horeysa, muraayada jilicsan ee qoyan ee Dhegeysiga Dhamaadka ah waxaan si fiican u taqaannaa waxa dhacay.
Taageerayaasha guud waxay sidoo kale aqoonsan doonaan muruqyada cusub ee Astralobe, kuwaas oo hadda ah dhacdooyin muhiim ah oo aan horey u aragno. xilliyada xagaaga, oo ay ku jiraan dhicitaanka derbiga, arooska guduudan iyo dhalashada danyarta danyarta.
Laakiin xaqiiqda ah in goobtii furitaanka deymaha la beddelay macnaheedu maaha in ay ka badan tahay rikoorada ka hor kii hore. Ka dib markaad ogaato, marka aad ogtahay meesha ay dhacdo in ay ku qaadato, kuma filna inaad ku burburiso waxa dhacaya. HBO waxkasta kama aysan dhigin Elastic ee dhacdooyinka xilli 8.
"Si daacadnimo ah, ma rabo in macluumaadkan hore loo sii wado," ayuu yiri Wall. "Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado asaaska asaasiga ah ee aan u baahannahay inaan sameyno si aan u sameysano isugeyn ku haboon. Waan jeclahay daawashada bandhigga iyo daacadnimada, ma sugi karo inaan arko sheekada sheekada oo dhan. "
Maqaalka buuxa ee BuzzFeed saari karo on link this oo u qalma akhris dhamaystiran.
] Source Source: HBO
Capcom's 16 Mini Game Console ayaa kaa dhigi doona sida ilmo kale - BGR